Norway: 140 qof oo soomaali ah ayaa 2019 wadanka ka bixinay. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Norway: 140 qof oo soomaali ah ayaa 2019 wadanka ka bixinay.
Norway: 140 qof oo soomaali ah ayaa 2019 wadanka ka bixinay.
Sida ay qortay wakaalada wararka Norway ee NTB, booliska Norway qeybtooda qaabilsan soo galootiga ee PU, ayaa sheegay in sanadkii 2019 ay tarxiileen isku dar 4157 qof, tiradaas oo aheyd midii ugu yareyd ee Norway laga tarxiilo mudo 10 sano ah.
Dadkan la celiyay ayaa isugu jiray dad qoxooti ah oo diidmo ka helay codsiga magangalyada, kuwo danbiyo galay iyo kuwo siyaabo kaleba loo musaafuriyay.
Isku dar PU ayaa sheegay inay tarxiileen 356 qof oo qoxooti ah kuwaas oo isugu jiro kuwo si toos ah dalkoodii loogu celiyay iyo kuwo lagu celiyay wadamo ay markii hore inta aysan Norway imaan faro ku lahaayeen.
Sweden ayaa ah dalka ugu badan ee sanadkii horey lagu celiyay dadka Norway laga musaafuriyay, waxeyna Norway Sweden ku celisay 484 qof, waxaana kusoo xigto Romania(255), Polen(252), Yukreyn(245), Talyaaniga(232) iyo Ruushka(212).
Dadka u dhashay dalka Yukreyn ayaa booska koobaad kaga jira dadka ugu badan ee sanadkii hore Norway laga celiyay, waxeyna Norway celisay 299 oo Yukreyn u dhashay. Waxaana soo raaca Roomaaniyaan(253), Raashiyaan(252), Albaaniyaam(224), Poolish(194), Litueniyan(156), Soomaali(146), Siiriyaan(129), Afgaani(124) iyo Ciraaq(120).
Tirada dadka ay Norway tarxiisho ayaa sanadkan aad hoos ugu dhacday, kadib markii ay yaraadeen tirada dadka qoxootinimada Norway soo weydiisto, sida ay sheegtay PU.
Xigasho/kilde: Færre utlendinger ble tvangsutsendt fra Norge i fjor
Previous articleWargeysyo: Porsgrun: Sadex Caruur soomaali ah oo aan iskuulka dib ugu soo noqon.
Next articleRedd barna: Wasiirka qoyska si toos ah ha usoo faragaliyo Kiiska Yaasmiin.